KUZOBUNGAZWA IMANDELA DAY NGE-YOUTH RUN – Sivubela intuthuko Newspaper
UNgqongqoshe wezeMidlalo esifundazweni iKwaZulu Natal uHlengiwe Mavimbela
UMNYANGO wezeMidlalo esifundazweni iKwaZulu Natal ngokubambisana neComrades Marathon Association bazoba nomqhudelwano iKwaZulu Natal Virtual Youth Run ngosuku lwangoMgqibelo.
Inhloso enkulu yalomqhudelwano ukubungaza inyanga kaTata Madiba njengoba ezalwa mhla zi-18 kuNtulikazi.
Kuzokhumbuleka ukuthi umhlaba jikelele ubhekene nobhubhane iCovid-19 nokuphoqe ukuthi imijaho emikhulu efana neComrades Marathon Kanye neMandela Marathon ihlehle ukubeka izimpilo zomphakathi eqhulwini.
Lo mjaho kulindeleke ukuthi uqhubeke nesasa lokuheha abasubathi abasuka kwizindawo ezahlukene ezakhele leli likaMthaniya. Kanti uzobe uhlukaniswa izigaba ezintathu okuwu-2km, 5km Kanye ne10km.
UNgqongqoshe woMnyango wezeMidlalo kulesifundazwe uHlengiwe Mavimbela ugqugquzela abantu ukuba kuphi nakuphi lapho bezobe begijima khona baqinisekise ukuthi baphatha izingqwembe zokulwisana nokubulawa ukuhlukunyezwa kwabesifazane Kanye nezingane.
“Siwumnyango siyakholelwa ekutheni kubalulekile ukuthi umphakathi uhlale uzivocavoca ngaso Sonke isikhathi. Sifuna ukusebenzisa lomjaho ukudlulisa umyalezo wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane nokuyinto ebonakala isiwumchilo wesidwaba kuleli,” kusho Mavimbela.
Abazongenela lomjaho bazokwenza bhusende Kanti kuyanxuswa umphakathi ukuba ulandele imiyalelo ebekiwe kathaqa ukuzama ukulwisana nokusabalala kwegciwane iCovid-19.